အင်းစိန် ထောင် မှာ ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်း နဲ့ အကြီးပိုင်း တစ်ချို့ရဲ့ လက် ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အင်းစိန် ထောင် မှာ ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်း နဲ့ အကြီးပိုင်း တစ်ချို့ရဲ့ လက် ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
အင်းစိန် ထောင် မှာ ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်း နဲ့ အကြီးပိုင်း တစ်ချို့ရဲ့ လက် ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး တို့ရေ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နှင့် အဖမ်းဆီး ခံလိုက် ရသော အကယ် ဒမီ လူမင်း နှင့် ပတ်သက် ပြီး သတင်း တွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ အကယ်ဒမီ လူမင်းဟာ အနုပညာလောကရဲ့..အောင်မြင် မှု ရှည်ကြာ စွာ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်တဲ့မင်းသား တစ်လတ် ဖြစ် ပြီး ပရိတ် သတ်ရဲ့ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ‌ကို အခိုင်အမာ ရရှိနေခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လူမင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှု စတင်.
ဖြစ်ပေါ် တဲ့ နေ့က စပြီး ပြည်သူ နဲ့ အတူ ရပ် တည်ကာ လူထုဆန္ဒ ထုတ် ဖော်ပွဲ တွေမှာ ပြည်သူနဲ့ တစ် သားတည်း တိုက်ပွဲ ဝင် နေခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦး ပါ။နောက်ပိုင်း မှာ တော့ အကယ်ဒမီလူမင်း အပါ အဝင် အနုပညာ ရှင်…၆ဦး CDM အရေး ပါဝင် လှုပ်ရှား မှုကြောင့် ရာဇသ တ်ကြီး ပုဒ်မ၅၀၅(က) ဖြင့် တရား စွဲဆို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အကယ်ဒမီ လူမင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့ညက တိမ်းရှောင် နေရာအိမ် အထိ အတင်းတံခါး‌တွေ..ရိုက်ဖျက် ချိုးဝင်ကာ ဖမ်းဆီး သွား ခဲ့ကြပါတယ်။အကယ်ဒမီ လူမင်း အဖမ်း ဆီး ခံရ ပြီး နောက်ပိုင်း မိသားစု ဝင် တွေ‌ရော ပရိတ်သတ်တွေ ရော ကပါ စိုးရိမ် နေခဲ့ ကြပြီး ဘာသတင်း မှသိပ်မ ကြား ရပေမဲ့..ထောင်ထဲ မှာ ကျန်မာ ရေး ဆိုး ရွား လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ မျိုး စုံ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။မနေ့က မတ်လ ၂၂ရက် နေ့မှာတော့ အကယ်ဒမီ လူမင်း အင်းစိန်ထောင်မှာ ကျန်းမာ ရေး ကောင်းမွန်စွာရှိနေ ကြောင်း..
သိရှိ ရတယ် ဆိုတဲ့ သ တင်း ထပ်မံ ကြားသိ လာခဲ့ ရပါတယ်။ မကြာသေးမီ ကလဲ အကယ်ဒမီ လူမင်း အပါ အဝင် အဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာ မောင်သာချို၊ ကိုမြ အေး စသည်တို့ အင်းစိန်သီးသန့်ထောင်မှာ ကျန်းမာစွာရှိနေကြောင်း သိရတဲ့ သတင်းလဲ ကြားသိခဲ့ရ ပါသေးတယ်။ပြည်သူတွေ အပေါ် ထားတဲ့ စေတနာ ပြည်သူတွေက ပို့သပေးနေ တဲ့ မေတ္တာ တရား တွေကြောင့် လူမင်း နှင့် အဖမ်းဆီးခံ ပြည်သူ အားလုံး ဘေး အန္တရာယ်များ ကင်းရှင်း ကြပါစေနော်။ဖတ်ရှု အားပေး ခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး လဲ သာယာ‌တဲ့ နေ့ရက်များ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်း ပေးလိုက် ရပါတယ်။
မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီး တို႔ေရ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ႏွင့္ အဖမ္းဆီး ခံလိုက္ ရေသာ အကယ္ ဒမီ လူမင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သတင္း ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ အကယ္ဒမီ လူမင္းဟာ အႏုပညာေလာကရဲ႕..ေအာင္ျမင္ မႈ ရွည္ၾကာ စြာ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္တဲ့မင္းသား တစ္လတ္ ျဖစ္ ၿပီး ပရိတ္ သတ္ရဲ႕ ခ်စ္ ျခင္း ေမတၱာ ‌ကို အခိုင္အမာ ရရွိေနခဲ့တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လူမင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ စတင္.
ျဖစ္ေပၚ တဲ့ ေန႔က စၿပီး ျပည္သူ နဲ႔ အတူ ရပ္ တည္ကာ လူထုဆႏၵ ထုတ္ ေဖာ္ပြဲ ေတြမွာ ျပည္သူနဲ႔ တစ္ သားတည္း တိုက္ပြဲ ဝင္ ေနခဲ့တဲ့ သူတစ္ဦး ပါ။ေနာက္ပိုင္း မွာ ေတာ့ အကယ္ဒမီလူမင္း အပါ အဝင္ အႏုပညာ ရွင္…၆ဦး CDM အေရး ပါဝင္ လႈပ္ရွား မႈေၾကာင့္ ရာဇသ တ္ႀကီး ပုဒ္မ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရား စြဲဆို ခံခဲ့ရပါတယ္။ အကယ္ဒမီ လူမင္းကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔ညက တိမ္းေရွာင္ ေနရာအိမ္ အထိ အတင္းတံခါး‌ေတြ..႐ိုက္ဖ်က္ ခ်ိဳးဝင္ကာ ဖမ္းဆီး သြား ခဲ့ၾကပါတယ္။အကယ္ဒမီ လူမင္း အဖမ္း ဆီး ခံရ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မိသားစု ဝင္ ေတြ‌ေရာ ပရိတ္သတ္ေတြ ေရာ ကပါ စိုးရိမ္ ေနခဲ့ ၾကၿပီး ဘာသတင္း မွသိပ္မ ၾကား ရေပမဲ့..ေထာင္ထဲ မွာ က်န္မာ ေရး ဆိုး ႐ြား လာတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ မ်ိဳး စုံ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။မေန႔က မတ္လ ၂၂ရက္ ေန႔မွာေတာ့ အကယ္ဒမီ လူမင္း အင္းစိန္ေထာင္မွာ က်န္းမာ ေရး ေကာင္းမြန္စြာရွိေန ေၾကာင္း..
သိရွိ ရတယ္ ဆိုတဲ့ သ တင္း ထပ္မံ ၾကားသိ လာခဲ့ ရပါတယ္။ မၾကာေသးမီ ကလဲ အကယ္ဒမီ လူမင္း အပါ အဝင္ အဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာ ေမာင္သာခ်ိဳ၊ ကိုျမ ေအး စသည္တို႔ အင္းစိန္သီးသန႔္ေထာင္မွာ က်န္းမာစြာရွိေနေၾကာင္း သိရတဲ့ သတင္းလဲ ၾကားသိခဲ့ရ ပါေသးတယ္။ျပည္သူေတြ အေပၚ ထားတဲ့ ေစတနာ ျပည္သူေတြက ပို႔သေပးေန တဲ့ ေမတၱာ တရား ေတြေၾကာင့္ လူမင္း ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံ ျပည္သူ အားလုံး ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းရွင္း ၾကပါေစေနာ္။ဖတ္ရႈ အားေပး ခဲ့ၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီး လဲ သာယာ‌တဲ့ ေန႔ရက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း ေပးလိုက္ ရပါတယ္။
Previous post လူကို လူလို ဆက်ဆံ သူမျိုး ကိုပဲ ပြန် လို ချင်တယ်
Next post သူ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ PAGE က မတင်ရင် ဘာသတင်း မှမယုံကြည်ဖို့ နဲ့ နိုင်ငံရေး မကောင်းတာ နဲ့ပဲ တစ်ချိန်လုံး စိတ်ညစ်နေစရာ မလိုကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်